Ford Everest Trend 2.2 2019 Review
SUV ကိုမှ Body-on-frame ဆိုသူတွေအတွက်... Body-on-frame SUV တွေထဲကမှ ရေရှည်ကုန်ကျစာရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ မောင်းနှင်အသုံးပြုလိုသူတွေအတွက် Ford ရဲ့ Everest Trend 2.2 2019 ဆိုရင် ဘယ်လိုနေမလဲ? Review video လေးထဲမှာသာ ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့- Showroom လိပ်စာလေးကတော့…. ▷ အမှတ် (၃) ၊ (၁၂) ရပ်ကွက် ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ( သမိုင်းလမ်းဆုံ အနီး ) ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်ပြီး ဖုန်းနံပါတ် 01 7521959 သို့ နံနက် 8:30 မှ ညနေ 6:00 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်လည်း... ▷ 09 426066615 ကိုဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ #Redline #CarReview #FordEverestTrend2.22019
Posted by Redline Media on Friday, 31 July 2020
US ကားဒီဇိုင်းတွေဟာ သိကြတဲ့အတိုင်း ကြီးတယ်။ မြင့်တယ်။ မာတယ်။ ခိုင်ခန့်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ Safety ပိုင်းလည်းကောင်းတယ်။ အခုကျနော် review လုပ်သွားမယ့် Ford ရဲ့ Everest Trend ကလည်း ဒီလိုအချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်။
တစ်ခုရှိတာက သူ့ရဲ့အတွင်းခန်းဟာ ရိုးရှင်းတယ်။ Luxury feeling မျိုးမရဘူးဆိုပေမဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိတယ်။
SUV တစ်စီးအနေနဲ့ Body on Frame ဖြစ်ပြီး 4WD နဲ့မဟုတ်တောင်မှ အနည်းဆုံး နောက်ယက်အနေနဲ့ရမှာဆိုတော့... တစ်ချက်လောက်ရှိုးလိုက်ပါဦး။
အပြင်ရုပ်ထွက်ပိုင်းကိုတော့ ခုနလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီ။ မြင်တာနဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ ခံစားမိစေတဲ့ကားမျိုးပါ။ အခု 2019 model မှာက Projector HID headlamps တွေ LED tail light တွေနဲ့ဆိုတော့ အရင် model တွေထက် ပိုကောင်းသွားပြီ။ 2019 မှာ features အသစ်က ဘာတွေလည်းဆိုရင်တော့ touchscreen တွေဖြစ်လာပြီ။ backup camera နဲ့ parking sensors တွေပါလာပြီ။ နောက် grille design ပြောင်းသွားပါပြီ။ Generation ပြောင်းသွားတာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ သိသိသာသာ ပိုကောင်းလာတဲ့သဘောပါ။
ကားက မြင့်သလို Ground Clearance ကလည်း ၉ လက်မနီးပါးဆိုတော့ off-road စစ်စစ်ကြီးမဟုတ်ရင်တောင်မှ တော်ရုံလမ်းကြမ်းတွေကိုပါ မောင်းလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်။
နောက်ပြီး ဒီ Ford Everest Trend က7seats ဆိုတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံကလူတွေအကြိုက်ပါပဲ။
ခုံသုံးတန်းစလုံးအပြည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ (boot ကိုဖွင့်ပြ) အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်း boot ဝင်ဆံ့မှုတော့လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုံသုံးတန်းစလုံးသုံးမယ်ဆိုရင်တောင်မှာ နောက်ခန်းဝင်ဆံ့မှုက 450 L လောက်အထိရနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ … ပြောရမယ်ဆိုရင် လက်တွေ့ပိုင်းအရ အသုံးကျနိုင်မှု တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပဲ။
Everest မှာမှ Titanium trim ဆိုရင် ပိုပြီးအဆင့်မြင့် ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိမှာဖြစ်ပေမဲ့ အခု Trend မှာလည်း ကြည့်ရသလောက်တော့ မဆိုးပါဘူး။ အတွင်းခန်းတွေကိုပဲကြည့်။
ထိုင်ခုံတွေက leather တွေ။ 2018 တုန်းကတော့ ရှမွိုင်း ထိုင်ခုံတွေပဲရှိသေးပေမဲ့ အခု 2019 မှာတော့ သားရေတွေဖြစ်သွားပြီ။ ဒါပေမဲ့ Titanium ရဲ့ leather ထိုင်ခုံတွေ လောက်တော့ soft မဖြစ်ဘူး။
ထိုင်ရတာတော့ အမေရိကန်ဒီဇိုင်း ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတယ်။ Seat motor တွေလည်းပါသေးတယ်ဆိုတော့ Titanium နဲ့ယှဉ်မယ်ဆိုရင် ထိတွေ့မှုပိုင်း ကွာတယ်ဆိုပေမဲ့
Steering ကလည်း soft leather နဲ့အုပ်ပေးထားတယ်။ Driver Display မှာက information ပြတဲ့ digital screen ၂ ခုပါပြီး အလည်မှာ ရိုးရိုး speedometer နဲ့ပါ။ Infotainment ကတော့ 8-inch ရှိပြီး Ford အတွက် Microsoft ကရေးပေးထားတဲ SYNC3 OS နဲ့ဆိုတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရသလို user friendly လည်းဖြစ်တယ်။ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့ USB ပေါက်လည်းပါတယ်။ Air-con တွေက Dual Zone လည်းဖြစ်သလို round လည်းဖြစ်တယ်။ နောက်ခန်း အလယ်ခုံကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ Head room Leg room ကျယ်တယ်။ နောက်ဆုံးခုံတန်းအတွက်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း ကလေးငယ်တွေအတွက် ပိုပြီးသင့်လျော်တဲ့ အနေအထားပါ။
ဒီတစ်ခေါက်တော့ safety ပိုင်းစိတ်ချရတဲ့ကားတစ်စီးအနေနဲ့ safety ပိုင်းတွေအရင် ပြောကြရအောင်။ ကြည့်ရသလောက် ဒီ trend မှာက ပုံမှန် မောင်းနှင်စီးနင်းသူတွေအတွက် လေအိတ်တွေသာမက ဒူးနဲ့ နံဘေးလေအိတ်တွေလည်းပါသေးတယ်။ နောက်ပြီး Traction Control အပြင် ESP လို့ခေါ်တဲ့ Electronic Stability Program ပါတဲ့အတွက် မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာ ပိုပြီး တည်ငြိမ်မှုကို ပေးတယ်။ ဒါက လမ်းချော်ထွက်မှုအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကာအကွယ်ပေးတာပေါ့။ လမ်းကြမ်းမောင်နှင်မှုအပိုင်းအတွက် အထောက်အပံ့ပေးတာတွေကတော့ suspensions တွေပါပဲ။ Coil & Shock Absorb bar ဆိုပေမဲ့ off-road suspension design ဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုမှ watts-link တွေသုံးထားတာမို့ အကွေ့တွေ၊ ချိုင့်ကြီးကြီးကျတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘီးတွေကိုငြိမ်အောင်ထိန်းပေးထားနိုင်တယ်။ တရွတ်တိုက်ပါမသွားအောင်လည်းထိန်းပေးနိုင်တယ်။ ပါဝါပိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် စစချင်းတော့ 2.2L turbocharged Diesel engine ဆိုတော့ ဒီကားအရွယ်အစား၊ အလေးချိန်နဲ့ မောင်းလို့မှကောင်းပါ့မလားလို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်းမောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ 3.2L အင်ဂျင်နဲ့ မြို့တွင်းမောင်းနှင်မှုအပိုင်း သိပ်ကွာခြားမှုမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကတ္တရာ၊ ကွန်ကရစ်မဟုတ်တဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ကွာခြားမှုပိုင်းက သိသာလာနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဒီ Trend 2019 ဟာ 4WD မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဒီအချက်ကတော့ လျော့တယ်လို့မြင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ 3.2 4WD ထက်တော့ ဆီစားနှုန်းပိုပြီးသက်သာနိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် ကားအသစ် အပြင်းမောင်း ဆီစားနှုန်းက 21.8 L/100 Km ဆိုတော့ လောလောဆယ်တော့ 4.7 kilometer per liter လောက်ပဲရတာတွေ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကားအသစ်တွေဟာ အစောပိုင်းအခြေအနေမှာ ဆီစားနှုန်းများတက်ပြီး ပုံမှန်အခြေအနေရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ 14 kilometer per liter လောက်အထိ ရလာပါလိမ့်မယ်လို့ နိုင်ငံတကာ consumer reports တွေအရသိထားပါတယ်။
Body on frame SUV ဖြစ်တဲ့ Ford ရဲ့ Trend မှာ 4WD မဖြစ်ပေမဲ့ Rear Wheel Drive ဖြစ်တာလေးကိုတော့ မဆိုးပါဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ နောက်ယက်တွေက ရှေ့ယက်တွေနဲ့စာရင် အရှိန်တင်နိုင်စွမ်းပိုကောင်းပြီး handling ပိုင််းလည်းပိုကောင်းတယ်။ ရုတ်တရက်အရှိန်မြှင့်တဲ့အခါမှာ ရှေ့ယက်တွေမှာရှိတတ်တဲ့ torque steer လို့ခေါ်တဲ့ ဘယ်/ညာ တိုးတဲ့ဒဏ်ကိုမခံရတာကြောင့်လည်းပါမယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ Maintenance စာရိတ်မှာတော့ ရှေ့ယက်တွေက ပိုသက်သာတာပေါ့။
Cruise Control တော့ပါတယ်။ adaptive တော့မဖြစ်ဘူး။ Adaptive Cruise Control နဲ့ လိုချင်ရင်တော့ Titanium ကိုရွေးချယ်မှရပါလိမ့်မယ်။
အခုမောင်းကြည့်ရသလောက်တော့ ရှေ့/နောက် ကြည့်ရတာ ရှင်းတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ထုံးစံအတိုင်း 0-100 test ကလေးကို အားပေးကြပါဦးဗျ။
Verdict အနေနဲ့ကတော့ သိပ်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးကြီးပြောမနေတော့ဘူး။
Body of Frame မှဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဒီ $47,500 တန် Ford Everest Trend 2019 model ဟာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ကားပါပဲ။ မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သိန်း ၆၅၀ ဝန်းကျင်လောက် ကျသင့်မှာပါ။ Adaptive Cruise Control တို့
4WD တို့ပါလာရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ သုံးသပ်ပေးရင်း...
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ( ၂၇.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၃၀.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ) ယာဉ်မှတ်ပုံတင်စာအုပ် (ကမ-၃) ပျောက်ဆုံးမိတ္တူ လာရောက်လျှောက်ထားသည့်ယာဉ်များစာရင်း